La Niña aad ayey u tabar yaraan kartaa bilaha soo socda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Dhacdooyinka saadaasha hawada, Duufaanada Kulaylka
Dadka badankood way yaqaanaan ifafaalaha El Niño. Si kastaba ha ahaatee, Gabadha sidoo kale waxay leedahay saameyn dhibaato dadka mana aha mid sifiican looga yaqaan shacabka.
La Niña waa dhacdo cimilo leh, sida El Niño, ay ka tirsan tahay qayb ka mid ah meertada dabiiciga ah ee cimilada adduunka. Ilmaha ayaa sidoo kale loo yaqaan Koonfurta Oscillation. Wareegtani waxay leedahay laba waji: wejiga diirran markaan haysanno El Niño iyo wajiga qabow markaan haysanno La Niña. Laakiin maxay ku kala duwan yihiin?
Goorma dabaysha ganacsiga Waxay si xoog leh uga soo dhacayaan galbeedka, heerkulka dhulbaraha iyo hareerahiisa ayaa hoos u dhacaya, sidaa darteed wejiga qabow ee loo yaqaan La Niña ayaa bilaabmaya. Taas bedelkeeda, markii ay xoogaystaan ​​dabaylaha ganacsigu way daciifayaan, heerkulka dusha sare ee baddu wuu kordhayaa oo wejiga diirran ee loo yaqaan El Niño ayaa bilaabmaya.
Dhacdooyinkaani waxay sababaan isbaddallo ku dhaca nidaamyada roobka ee dhammaan gobollada kuleylaha muddo dhowr bilood ah isbeddeladanna waxay ku beddelanayaan xilliyo kala duwanaan kara shan illaa toddoba sano.
La Niña waxay saameyn ba'an ku yeelatay meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah sanadihii 2015 iyo bilihii ugu horreeyay ee 2016. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Ururka Saadaasha Hawada Adduunka (WMO) ifafaalahaani wuxuu noqon doonaa mid dhexdhexaad ah ama daciif ah bilaha soo socda. Waxaa la soo sheegay inay u dhaxeeyaan 50% iyo 65% fursad in La Niña ay daciif tahay seddexdii bilood ee ugu dambeysay 2016 iyo seddexda bilood ee ugu horreysa 2017.
Tani waa war aad ufiican kadib dhacdooyinkii El Niño ee sanadkii hore iyo horaantii sanadkan. Ayaa ahayd Niño kii ugu darnaa abid la diiwaan geliyo waana taas sababta heerkulka ugu sarreeya looga diiwaan geliyey adduunka. Astaamahan saadaasha hawada ayaa ah wejiyada ka soo horjeedka isdhexgalka jawiga iyo Badweynta Baasifigga, waana sababta ay ugu keenaan saameyn lid ku ah cimilada qeybaha kala duwan ee adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » La Niña waxay noqon kartaa mid daciif ah bilaha soo socda
Sidee ayay gabadhu ugu saameysaa Spain?
Hagaag, runtii, in kasta oo daraasado dhowr ah lagu sameeyay mowduuca, qaarna ay ku guuleysteen inay tirakoob ku xiraan kororka roobka ee beelaha qaarkood iyo ifafaalaha, gabagabada ma lahan culeyska la doonayo. Sidaa darteed, Isbaanishka ma jiro xiriir la leh La Niña.
Cimilada-kic waxay ka caawisaa dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada